युरोपेली रूले |
तपाईं सरल अझै व्यावहारिक सुविधा र ग्राफिक्स संग सरल रूले खेलको लागि देख रहे भने, युरोपेली रूले तपाईं को लागि सबै भन्दा राम्रो छ. यस निःशुल्क रूले साइट बोनस, तपाईं संख्या खेल्न सक्छ 1 गर्न 36 र एक शून्य. नम्बर अंधाधुंध को रूले पाङ्ग्रा मा वैकल्पिक रातो र कालो स्पट मा मार्क. यो खेल को 3D ग्राफिक्स व्हील को क्लोज-अप दृश्य संग व्यावहारिक अनुभव प्रदान गर्दछ. त्यसैले तपाईं स्पष्ट बल रोलिंग र देख्न सक्छन् जहाँ यो मुलुकमा. त्यहाँ पनि यो भेद मा एक दौड्ने बाटो सट्टेबाजी विकल्प छ. यो खेलको सट्टेबाजी सीमा £ 0.20 को न्यूनतम सुरु प्रति स्थिति £ 100 को अधिकतम.
युरोपेली रूले विकासकर्ता बारेमा
यो पेशेवर निःशुल्क रूले साइट बोनस खेल NetEnt द्वारा सिर्जना गरिएको थियो. यस्तो स्लट रूपमा विभिन्न क्यासिनो विभाग देखि खेल सयौं एक विश्वको सबैभन्दा ठूलो विकासकर्ताहरूले को, तालिका र प्रत्यक्ष बिक्रेता खेल.
यो सरल मा निःशुल्क रूले साइट बोनस खेल, तपाईं बाहिर बाजी सहित विभिन्न संख्या मा आफ्नो बाजी गर्न सक्नुहुन्छ. जहाँ तपाईं उच्चतम इनाम जित्न सक्छौं स्थिति संग एकल सीधा छ 35 आफ्नो कुल सट्टेबाजी रकम समयमा. त्यहाँ चार फरक भित्र बाजी थप तपाईंबाट जित्न सक्छौं छन्. यो विभाजन दुई फरक संख्या हुन्छन् र दिन्छिन् 17 एक हुँदा बलमा ती दुई मध्ये कुनै मा जमीन. त्यसै गरी, सडक को भुक्तानी संग एक स्तम्भ मा तीन संख्या छ 11 एक. कुना चार नम्बर हुन्छन् र दिन्छिन् 8 एक. अन्तमा, छ संख्या छ कि रेखा दिन्छिन्5आफ्नो कुल शर्त मा एक.
यो स्लट को सबै भन्दा राम्रो सुविधा यसलाई अनलाइन स्लट मा प्ले गर्न सकिँदैन भन्ने छ कुनै जम्मा मोबाइल र थप, तपाईं रील जुनसुकै ठाउँमा तीन वा बढी ग्रह स्क्याटर प्रतीक भूमि भने बोनस सुविधाहरू ट्रिगर गर्न सकिन्छ. तपाईंले यस सफल हुनेछ भने, त्यसपछि तपाईं दस पश मुक्त spins दिइनेछ. हरेक यो राउन्ड समयमा गरे जीत 2x ले गुणन हुनेछ र जंगली त्यसपछि समावेश छ भने यो 4x द्वारा गुणा गर्नेछन्. तपाईं पर्याप्त भाग्यमानी हुन् र तीन थप छरिन्छ भूमि थप सक्षम छन् भने, त्यसपछि यो तपाईं spins पुन: ट्रिगर दिनु हुनेछ.
बाहिर सट्टेबाजी: तपाईं देखि जित्न सक्छौं कि बाहिर बाजी पाँच विभिन्न प्रकारका छन्. रातो-कालो, उच्च-कम, जोड बिजोड, स्तम्भ र दर्जन स्थिति हो. को पेआउट यहाँ 1 गर्न 1 स्तम्भ र दर्जन संग बाहेक2गर्न 1. यी सट्टेबाजी को सम्भावना राम्रो भित्र बाजी भन्दा उच्च छ र यसैले एक विजेता मोडमा तपाईं राख्छ.
खेल परिणाम: यो नि: शुल्क रूले साइट बोनस खेल मुख्य स्क्रिनमा पछिल्लो दस खेल को परिणाम देखाउँछ. इतिहास ट्याबले अन्तिम परिणाम देखाउँछ पनि छ 100 खेल. यी तथ्याङ्कहरू तपाईं आफ्नो भविष्य खेल अझ प्रभावकारी रणनीति खेल्न मदत.
संग मन-उड्ने 3D ग्राफिक्स र रोमाञ्चक सुविधाहरू तपाईं सजिलै जीत मद्दत गर्न, यो निःशुल्क रूले साइट बोनस खेल को सबै भन्दा कम घर किनारा छ 2.7%.